Posted by ဇနိ at 4:25 PM
phoo September 26, 2008 at 5:27 PM
စာအရေးအသားကောင်းတော့ ဖတ်ရတဲ့သူတောင် မှ တကယ့်အညာရောက်သွား တယ်အစ်မ ဇနိ။ တောင်သူတွေရဲ့ဘ၀ကလဲသနားပါတယ်အစ်မရယ်။ ကျွဲလိုနွားလိုရုန်းရပြီးတော့။ ပညာရေးကလဲတောရွာမှာ နိမ့်ကျ။ ကျန်းမာရေးကျတော့လဲ ဆေးမှူးလောက်လေးလတောင်မှ ရွာတိုင်းမကမရှိနဲ့။ သနားပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ နောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်ကို ဆန်းစစ်လိုက်ရင်......
Republic September 26, 2008 at 5:36 PM
မမနိ ရဲ့ ပို့စ်လေး ကို သေချာဖတ်ပါတယ်၊။ စာဖတ်နေရင်း နဲ့ မမနိ တို့အညာရွာလေး ကို စိတ်က ရောက်သွားပါတယ် ၊၊ ကိုယ့်ချင်း မို့ တော်ကြောင်း မပြောတော့ဘူးဗျာ ၊၊ ရိုးသား ပွင့်လင်းတဲ့ မမနိ ရဲ့ ဟန်ကို စာထဲမှာ မြင်နေရပါတယ် ၊၊ အမြဲပျော်ရွင်ပါစေဗျာ ၊၊
မုဒိတာ September 26, 2008 at 5:48 PM
တ၀ဘဲ ဖတ်လိုက်ရတာ ဒီအထက်ီအညာအကြောင်းဖတ်ပြီးတော့
ပုဂံသွားခဲ့တာကို သတိရတယ် အမရေ
လင်း September 26, 2008 at 6:03 PM
အဲဒိ အညာက ရွာကို သွားတောင်လည်ချင်လာပြီ၊ လမ်းကထမင်းဆိုင်က ကြက်ကြော်သုတ်လဲစားချင်တယ်။ လယ်ထဲကို ပို့ တဲ့ ထမင်းလည်း စားချင်တယ်။ တခါလောက် ကြက်ကြော်သုတ်လေး ဘလော့ပေါ်မှာ လုပ်ကျွေးပါလားဟင်။
Anonymous September 26, 2008 at 6:24 PM
မဇနိပို့ စ်ဖတ်လိုက်ရတာ အညာဓလေ့ ရုပ်ရှင်ကားကြည့်လိုက်ရသလိုပဲ ။ အောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးဖတ်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်း ဒါတွေကအညာမှာပဲမဟုတ်ဘူး အစ်မေ၇့ ကျနော်တို့အောက်ဖက်လာကြည့်ပါလား အားလုံး လူငယ် လူလတ်ပိုင်းတွေ ရှမ်းပြည်( ထိုင်း) ကိုတက်လာကြာတာပြီးပဲ ရွာမှာဆိုလို့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ခလေးတွေပဲကျန်တယ် ကိုယ်တွေ့ ကိူယ်တွေ့ ........။
PAUK September 26, 2008 at 7:05 PM
Kay September 26, 2008 at 7:43 PM
မဇနိ လည်း စာရေး ကောင်း ဗျား။
khin oo may September 26, 2008 at 9:20 PM
မဇနိစာ ရေးကောင်း တာ ကတော. ပြော မနေနဲ. ။ ကိုယ့်ပိုစ် မတင် ခင် သူ. ရေးထားတာ ဖတ်မိရင် ကိုယ်ရေးထားတာ ဖျက် မိမှာစိုးလို. ကမန်းကတန်း ရေးပြီး တင်ခဲ့ရတယ်။
ဆောင်း September 27, 2008 at 1:54 AM
ဖတ်လည်းပြီးရော ရင်ထဲမောကျန်ခဲ့တယ် သိလား။ တကယ့်ကိုယ်တိုင် လူ့ ဘ၀ဇတ်ခုံပေါ်ရောက်သွားသလို ဖြစ်သွားတာ... တို့ များ မြန်မာပြည် ဘယ်တော့မှ ပြန် ကောင်းပါ့မလဲ လို့တွေးမိတယ်။
nu-san September 27, 2008 at 8:29 AM
မဇနိရေးပြလိုက်တဲ့ တောဓလေ့အထတွေက ဘယ်နှစ်ခါ ဖတ်ဖတ် ရိုးတယ်မရှိလှဘူး။ အဒေါ်က ကပ်စေးနဲတယ်လို့ ဆိုလို့ အမလည်း အမကြီးမေကို သတိရမိတယ်။ ကြီးမေက ပဲခူးဘက်တင်နေတာ။ အမ ကြီးမေလည်း အရမ်းစေ့စပ်တာ။ မဇနိရေးပြတော့မှ အလုပ်သမားတွေကို လယ်ရှင်တွေက ထမင်းချိုင့်ပို့ပေးရတာကိုးနော်.. ပို့စ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ ထမင်းချိုင့်ထဲက စားချင်လိုက်တာ.. ထမင်းကြော်ရယ် ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ ချဉ်ပေါင်ချက်တဲ့...
အင်း.. နောက်ဆုံးအပိုင်းလေး ဖတ်ပြီး မဇနိနည်းတူပါပဲ.. တောသူတောင်သားတွေရဲ့ အဖြစ်ကို တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပြီ။ :(
တားမြစ် ထားသော... September 27, 2008 at 4:17 PM
အညာကို ခေါ်သွားတယ်။ ကြည်နူးစရာဓလေ့တွေနဲ့ ရိုးသားမှုတွေကို ခံစားနေတုန်းမှာ .... အင်း။ ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ “ကျုပ်တို့ဆီမှာတော့ နင်းပြားတွေက အခုထိ နင်းပြားသာသာရယ်ပါပဲ။ ဘာမှ တိုးတက်သာ ဟုတ်ဘူးရယ်” ကဲ၊ အညာသံမပါပေဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့တွင် မြှင့်တင်ပေးရန် လူတန်းစားများစွာ ကျန်နေသေးသည်။
မောင်ဖြူ September 27, 2008 at 7:30 PM
မဇနိရေ၊ အပင်ပန်းခံပြီး အရှည်ကြီးရေးထားလို့ အကြာကြီးဖတ်သွားတယ်။ အညာဓလေ့ကတော့ စုံရောဆိုပါတော့။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးဖတ်မိတော့ အသက်ရှူကြပ်သွားတယ်။ တောကလူတွေကမှ စပါးစိုက်ပြီး ထမင်းတစ်နပ်အတွက် အဲလောက်ရုန်းကန်နေရရင်၊ မြို့ကဆန်ဝယ်စားရတဲ့ လက်လုပ်လက်စားတွေဆို ပိုဆိုးတယ်။ အရင်ကဓလေ့လေးတွေနဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးတွေက လွမ်းစရာပါပဲ။
Anonymous September 28, 2008 at 5:26 AM
ရေးထားတာ တော့ လက်ဖျားခါပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလောက်လေးမှာ ချိတ်ပေးထားမယ်နော်။
သက်ဝေ September 28, 2008 at 9:59 AM
ရေးနိုင်စရာ အတွေ့ အကြုံ ၀မ်းစာကလဲ တော်တော်ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှိနေတာကိုး...။ ဖတ်ရတာ အညာရဲ့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့အညာဓလေ့တွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်သွားပါတယ်...။
တန်ခူး September 28, 2008 at 1:47 PM
မဇနိရေ… အကြောင်းအရာရော အရေးအသားရောက ဆွဲဆောင်လိုက်တာ ပို့ စ်လဲ ပြီးရော ငူငူကြီး… လွမ်းတာရော စိတ်မကောင်းတာရော……..ရော…….ရော…. ခံစားချက်တွေစုံလို့ … ဟိုတနေ့ ကပဲ အဖေနဲ့ ပြောတော့ ကြက်သွန်ဈေးတွေ ကျတယ်တဲ့… စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ… မဇနိရေ… တို့ မိဘတွေလာရင် အဲဒီလို ကျဉ်းကျဉ်းကျူပ်ကျူပ်ထဲမနေနိုင်လို့ရောက်တောင်မရောက်သေးဘူး ပြန်ချင်ရော… မဇနိတို့ အဒေါ်ရဲ့လက်ဘက်တစွန်းလောက်တော့ မြည်းကြည့်ချင်သား…
Smiles September 30, 2008 at 5:29 PM
အစ်မစာတွေကိုဖတ်ရတာ ညီမရောဂါပိုပိုဆိုးလာပြီ၊ ညီမလည်းအစ်မလိုပဲ မြို့သူဖြစ်ပြီး အညာဆိုရင် အသံကြားတာနဲ့ ရင်ထဲကကိုချစ်ချစ်လာတယ်၊ မိဘတွေရဲ့ ရွာကလေးပေါ့၊ ဆွေမျိုးအားလုံးအဲဒိမှာ ၊ တောင်သာနယ်က နန်းတဲရွာတဲ့၊ ဆင်တဲဝချောင်းလေးဘေးက ရွာကလေးပေါ့၊ အရမ်းလွမ်းတယ်အစ်မရယ်၊ ညီမက ကျောင်းတစ်နှစ်ပြီးတိုင်း တစ်ခါသွားလည်နေကျ၊ ရွာဓလေ့ဘုရားပွဲကျင်းပပုံလေး အစ်မကြုံဖူးရင် ရေးပါဦးနော်၊ အလွမ်းပြေဖတ်ချင်လို့ပါ၊
မဇနိ October 7, 2008 at 6:03 PM
ကိုယ်ချင်းမို့ပြောလိုက်အုံးမယ် ကိုကြီး ၀ီ ရေ ချီးကျူးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော် ဖိတ်စာပို့လိုက်မှာ သိလား
ဟုတ်ပါ့ ဘယ်နှခေါက်သွားသွားမရိုးတဲ့ ပုဂံကို သွားချင်သေးတယ် မုဒီတာ
လယ်ထဲက ထမင်းက သိပ်စားကောင်းတာ လင်းရ
ထမင်းကြော်လေးကို ကြက်သွန်ဥသေးသေးလေးတွေ နှုတ်ပြီး မြှုပ်စားရင် သိပ်ကောင်းတယ်
ကျိုက်ထိုက သူငယ်ချင်းလည်းပြောတယ် သူတို့ဆီမှာလည်း လူငယ်တွေ မရှိတော့ဘူးတဲ့ မောင်မျိုးရေ
အမေ့ကို ဘာတွေချွဲလိုက်လဲ ပေါက်
ကျေးဇူးပါ အမ ကေ
မမကေအိုအမ်က ပိုအရေးကောင်းတာများ မသိရင် အခက်
ဟုတ်ပါ့ ဆောင်း ရေ
ညီမတို့က အညာမှာနေ အညာချစ်သူတွေဆိုတော့ ဒါတွေပဲ ရေးဖြစ်နေတာပါ မမနုစံ
တောင်သူတွေကလည်း တကယ် သနားစရာကောင်းလှပါတယ်
မြှင့်တင်ပေးရန် လူတန်းစားများစွား ကျန်နေသေးသည် တဲ့လား ကိုတားမြစ်ထားသော ရေ
အကြာကြီးဖတ်သွားတယ်ဆိုလို့ အပင်ပန်းခံရတာ ၀မ်းသာမိတယ် ကိုမောင်ဖြူ
မမသက်ဝေရေ အညာသူဆိုတော့ ရင်းနှီးနေတာလေးတွေပါ
အမတန်ခူးကို ခေါ်သွားချင်တယ် လက်ဖက်ပြချင်လို့
ရွှေပေါင်လောင်ပွဲအကြောင်းလေး ရေးမယ်နော် Smiles